‘ॐ’ शब्द एक रहस्यमय ब्रह्माण्डीय ध्वनि, ‘ॐ’ को अर्थ र आध्यात्मिक महत्व - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
‘ॐ’ शब्द एक रहस्यमय ब्रह्माण्डीय ध्वनि, ‘ॐ’ को अर्थ र आध्यात्मिक महत्व
प्रकाशित मिति: १४ श्रावण २०७७, बुधबार July 29, 2020
ॐ अर्थात ओम । यसलाई ओमकार वा प्रणव पनि भनिन्छ । यति एउटै शब्द, जले सम्पूर्ण ब्रम्हाड समेटेको छ । ओम धार्मिक होइन, यो हिन्दु धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म जस्ता केही धर्ममा एक पारम्पारिक प्रतिक र पवित्र ध्वनीको रुपमा प्रकट हुन्छ । यो सार्वभौमिक हो । यसमा नै पुरा ब्रम्हाण्ड छ ।
‘ॐ’ध्वनी सबै भन्दा सुस्मत्मध्वनीहरु ‘अ’, ‘उ’ र ‘म’ध्वनीहरुको संयुक्त रुप हो । ‘अ’, ‘उ’ र‘म’सबै ध्वनीहरुका जननी ध्वनी हुन् । ‘अ’, ‘उ’ र ‘म’मध्य कुनै एकको प्रयोग नगरी कुनै ध्वनीको उच्चारण सम्भव नै छैन ।
यि ध्वनीहरु विना कुनै किसिमको ध्वनीको अस्तित्व सम्भव छैन । तर कुरा यतिमा सिमित छैन । समग्र जगत र चराचर मात्राको जननी पनि‘ॐ’ध्वनी नै हो ।
ओम’ यो शब्द हामी बेलाबखत जप गर्छौ । ओम जप गर्दा के हुन्छ ? मुखबाट ओम आवाज निकाल्दा त्यसले स्थुल शरीर र मनमा कस्तो प्रभाव पार्छ होला ?
‘ॐ’ जप किन गर्ने ?
‘ॐ’ को अर्थ र महत्व
जसरी विज्ञानका सन्दर्भमा प्रयोगशालामा वैज्ञानिक परिक्षणहरु गरिन्छन्,त्यस्तै धर्मका सन्दर्भमा हाम्रो आफ्नै शरिर प्रयोगशाला हो । अनि शरिरमा घटेका भावहरुर अनुभुतीहरु नै सर्बोतम ज्ञान हुन् ।
‘ॐ’ध्वनीलाई किन ब्रम्हा, विष्णु र महेशको संयुक्त रुप भनियो भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले आफैमा परिक्षण गरेर हेर्न सक्दछौं । आँखा चिम्म गरेर ‘ॐ’कार जाप गर्दा अनुभुती गर्न सकिन्छ ‘अ’उच्चारण गर्दा हाम्रो नाभीमा संवेदना महशुश हुन्छ । ‘उ’उच्चारण गर्दा हृदयमा र‘म’उच्चारण गर्दा शीरमा संवेदना महशुश गर्न सकिन्छ ।
नाभी जननीको प्रतिक हो । आमाले बच्चालाई जन्मदिनु भन्दा अगाडि नौ महिना गर्भमा राख्छे जुन नाभीको भित्र पटिको भाग हो । त्यस्तै नवजात शीशु जन्मेको बखत आमासँग नाभीकै कारण जोडेको हुन्छ ।
बच्चाहरु शरिर भित्रको उर्जाको केन्द्र नाभी नै हो । त्यस्तै मानिस जब आफैलाई नै भुलेर मग्न भई निर्विचार अवस्थामा केहि चिजको श्रृजना गर्दछ तब मानिसको शरिर भित्रको समग्र उर्जा नाभिम मै केन्द्रित हुन्छ ।
मन्त्रको अन्त्यमा ‘स्वाहा’ किन हुन्छ?
ब्रह्माले भने, जब मन्त्रको अन्त्यमा ‘स्वाहा’ भनिन्छ तब मात्रा होममा चढाएका वस्तु अग्निले नजलाइ‍ स्वर्गका देवताले पाउँथे। यो संगै ती स्वाहा देवी अग्नीको स्त्री साथी भइ सगै रहन थालिन।
अग्निको शक्ति अनि स्वाहा देवीले आफ्नो वशमा लिइन। अनि मन्त्रको अन्त्यमा ‘स्वाहा’ भनिन थाल्यो कि स्वर्गमा फेरी खानेकुराको संकट नपरोस भनि।